သစ်ခက်သံလွင် အက်ဆေး၊ နရီမင်း ရဲ့ "လွှတ်မချဖြစ်သေးတဲ့ ဖန်ကွဲစတွေ"
on September 29, 2016 သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ - Variety
ကြောင်စုန်းတွေက အနီးပတ်ဝန်းကျင်က ကြောင်ထီးပေါက်စတွေကို အကုန်လိုက်ပြီး ကိုက်သတ်ပစ်သလိုမျိုး လူတွေဟာ ကိုယ့်နေရာကို လာပြီးစိန်ခေါ်မယ့် ခြိမ်းခြောက်မှုမျိုးကို အလိုမရှိ ကြဘူးတဲ့။ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကတော့ဖြင့် ရနိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကို လောဘတကြီးထုပ်ပိုးနေကြ တုန်းမို့ မီးလောင်ပြင်ကနေ ထွက်ပြေးဖို့ သတိမရကြသေး ...
အတင်းအဓမ္မ စိတ်လိုက်မာန်ပါ ဆုပ်ညှစ်ထားတဲ့ သူ့လက်ထဲ ဘ၀ဟာ ပစ်စလက်ခတ် ကြေမွနေတဲ့ စက္ကူစုတ်တစ်စနဲ့ တူနေလိမ့်မယ်။ တကယ်က ဖန်ကွဲစတွေကို မလွှတ်တမ်း ဆုပ်ညှစ်မိထားတာမျိုး ပိုဖြစ်နိုင်တယ်။ လက်ထဲမှာ သွေးအလိမ်းလိမ်းနဲ့ဘ၀က ကြေမွလို့။ အခုထိ လွှတ်ချပစ်လိုက်ဖို့ စိတ်မကူးမိသေးတာက အယောင်ယောင်အမှားမှားလား။ တမင်တကာပဲလား။ မရေမရာ ဝေေ၀၀ါးဝါး။ သူ့စိတ်ဟာ အရာရာကို ဝေခွဲရခက်မှုမျိုးနဲ့ အမြဲတမ်း နောက်ကျိနေတတ်တယ်။
လမ်းဆုံလမ်းခွရောက်တိုင်း ဘာဆုံးဖြတ်ချက်မှမချဘဲ ကြုံရာလျှောက်ခဲ့ရင်းက သက်တမ်းတ၀က်ကျိုး ချိန်မှာတော့ ဘယ်ကိုရောက်နေပြီလဲ မသိ။ မိဘတွေနဲ့လူချင်းကွဲလာတဲ့ ပွဲခင်းထဲက ကလေးငယ် လို ယောင်ချာချာနဲ့ မြင်မြင်သမျှ မျက်နှာတွေကို အားကိုးတကြီး လိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ် မျက်နှာပေါ်မှာမှ ကြင်နာမှုအရိပ်အယောင်ကို ရှာမတွေ့ဘူး။ ပျော်ရွှင်မှုကို အရူးအမူးရှာဖွေနေကြတဲ့ အငမ်းမရမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ကြင်နာမှုခြောက်ခန်းနေတဲ့ အပြုံးတုတွေ တပ်ဆင်ထား ကြတယ်။ အတွင်းဘက်မှာ လောင်ကျွမ်းနေကြတဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ သောကတွေက မီးထိုးပေးလို့။ မျက်နှာပေါ် အပူငွေ့တွေ ရှိန်းရှိန်းတက်နေကြတယ်။
(ပျော်ရွှင်မှုဟူသည် အေးမြသောအပူချိန်၌သာ တည်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဖြစ်၍ မြင့်မားလှသောအပူချိန် ၌ ပျော်ရွှင်မှုစစ်စစ်ကို ဖမ်းယူရရှိခြင်းငှာ မစွမ်းသာ။ ကြင်နာမှု၊ မေတ္တာတရား အစရှိသော အအေးခံ ကိရိယာတမျိုး သင်တို့၏ ပျော်ရွှင်မှုရှာဖွေရေး ဓာတ်ခွဲခန်း၌ အမှန်တကယ်လိုအပ်နေသည်ကို သတိချပ် ကြပါကုန်)
ဂုန်နီအိတ် စွပ်ခံထားရတဲ့နွေရာသီတွေ၊ ရွှံ့ဗွက်အလိမ်းလိမ်းနဲ့ မြင်ရက်စရာမရှိတဲ့ မိုးရာသီတွေနဲ့ ပိန်းပိတ်နေတဲ့နှင်းထုအောက် လမ်းပျောက်နေတဲ့ ဆောင်းရာသီတွေကိုသာ လက်ဝယ်ပိုင်ပိုင် သူရခဲ့ တယ်။ စမ်းသပ်ခန်းအတွင်း အမြီးဖြတ်ခံထားရတဲ့ ကြွက်တွေ၊ ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့သွားတဲ့လူတွေ၊ ကြမ်းပြင်ပေါ် အတောင်သေနေကြတဲ့ ပိုးဖလံကောင်တွေ။ ပြီးတော့ သူတပါး မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျမှ စားရမယ့် ထမင်းလုတ်တွေ၊ မီးလောင်နေတဲ့ အဆောက်အအုံတခုထဲက ထွက်ပေါက် ကျဉ်းကျဉ်းကလေးကို အလု အယက် တိုးဝှေ့ထွက်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတဲ့ လူတွေ၊ ဘတ်စ်ကားတစီးပေါ် ထိုင်ခုံတနေရာရရှိရေး တိုက်ပွဲတွေ။ လက်မှတ်တစောင်ရဖို့ သူမကြိုးစားခဲ့ဖူးဘူး။
ထိုင်ခုံတနေရာအတွက် သူမစဉ်းစားခဲ့ဖူးဘူး။ အခုမှပဲ ရထားလက်မှတ်စစ်တက်လာမှာကို သူ ကြောက် ရွံ့နေမိတယ်။ ကြောင်စုန်းတွေက အနီးပတ်ဝန်းကျင်က ကြောင်ထီးပေါက်စတွေကို အကုန်လိုက်ပြီး ကိုက်သတ်ပစ်သလိုမျိုး လူတွေဟာ ကိုယ့်နေရာကို လာပြီးစိန်ခေါ်မယ့် ခြိမ်းခြောက်မှုမျိုးကို အလိုမရှိ ကြဘူးတဲ့။ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကတော့ဖြင့် ရနိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကို လောဘတကြီးထုပ်ပိုးနေကြ တုန်းမို့ မီးလောင်ပြင်ကနေ ထွက်ပြေးဖို့ သတိမရကြသေးဘူး။ တချို့ဆို လူမမည်ကလေးငယ်တွေကို ချီပိုးဖို့ သတိမရ။ ပစ္စည်းတွေ ထုပ်ပိုးနေကြတာနဲ့ပဲ အလုပ်ရှုပ်လို့။ အို. . .ဘာတွေလဲ။ (တီကောင်အထွေးလိုက်ကြီးအား မြင်တော်မူသော ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ သည် ပြုံးတော်မူလေ၏)။ လူတွေ တစ်ယောက်ပခုံးပေါ်တစ်ယောက် အလုအယက်နင်းတက်။ ပြန်ပြုတ်ကျသူကကျ၊ တက်သူကတက်၊ နင်းသူကနင်း၊ ထွေးလုံးရစ်ပတ်။ ဘယ်လိုလူတွေလဲ။ ကြက်ခြင်းထဲကကြက်တွေ အသတ်ခံရတော့မှာချင်းအတူတူ တကောင်ကိုတကောင်က ထိုးဆိတ် ကုတ်ဖဲ့။ မိတ်လိုက်ဖို့ကြိုးစား။ အာအီးအီးအွတ်တွန်လို့။ နောက်ဆုံးတော့ လူတွေရနိုင်သမျှဟာ ခြောက်ပေ၊ နှစ်ပေ မြေနေရာကလေး ပါလားဆိုတာ မြေပိုင်ရှင်ကြီး တော်လ်စတွိုင်း သိသွားခဲ့တယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ကြိုးပြတ်ပြီး ပြုတ်ကျ လာတဲ့စွန်ကို ၀ိုင်းလုကြသလိုမျိုးပါပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ ဘယ်သူ မှဘာမှမရ။ စက္ကူစွန်ကလေးသာ အစိတ်စိတ်အမြွှာမြွှာစုတ်ပြဲသွားရတယ်။ အဲဒီတုန်းက လက်ရှခဲ့ဖူးတဲ့ ဒဏ်ရာက သူ့အတွက် တသက်စာ သင်ခန်းစာပေါ့။
ထန်းလျက်ခဲ သေးသေးလေးပေါ် ယင်ကောင်တွေ အလုအယက်အုံခဲလို့။ တကယ်တော့ အဝေးကနေ သံဝေဂနဲ့ငေးကြည့်နေရတာပဲ ထန်းလျက်ခဲအရသာထက် ပိုပြီးချိုမြိန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထမင်းရည်ခွက် သေးသေးလေးကို လုသောက်ရင်း ခွေးတွေမာန်ဖီနေကြတဲ့ အသံမျိုးကတော့ ဘယ်မှာလာပြီး နားဝင် ပီယံ ဖြစ်နိုင်မှာတဲ့လဲ။ စမ်းသပ်ခန်းအတွင်း အမြီးဖြတ်ခံထားရတဲ့ ကြွက်တွေ၊ ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့သွားတဲ့ လူတွေ၊ ကြမ်းပြင်ပေါ် အတောင်သေနေကြတဲ့ ပိုးဖလံကောင်တွေ။ ပြီးတော့ သူတပါး မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျမှ စားရမယ့် ထမင်းလုတ်တွေ . . . .သတ္တ၀ါတွေဟာ မာယာကြောင့်သာ အသက်ရှင်နေကြတာတဲ့။ မာယာဆိုတာ သဘာဝရဲ့ရွေးချယ်မှု။ မာယာများ အပြိုင်အဆိုင် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်။ ပုတ်သင်ညိုတွေ အရောင်ပြောင်းတတ်တာလည်း မာယာပဲ။ ယုန်တွေ အပြေးမြန်တာလည်း မာယာပဲ။ မြွေတွေ အဆိပ်ရှိ တာလည်း မာယာပဲ။ ပိုးနှံကောင်တွေ နံတာလည်း မာယာပဲ။ သူအဆိပ်မရှိဘူး။ သူ့မှာ အနံ့လည်း မရှိဘူး။ ဒါဖြင့် သူဘာလို့အသက်ရှင်နေတာလဲ။ ဒါပေမဲ့ သူကကြောက်တတ်တယ်။ တကယ်တော့ ကြောက်တတ်တာလည်း မာယာပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ၀ါးစားပစ်လိုက်ချင်လောက်အောင် ဆာလောင်နေတဲ့နေ့တွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ထမင်း၀၀ စားနေရသူတွေ ရဲ့ထမင်းစားရဖို့ အရေးမကြီးကြောင်း ဆုံးမစကားတွေကို နာခံခဲ့ရဖူးတယ်။
If I were you…. ငါသာမင်းဆိုရင်တဲ့။ ငါကငါ။ မင်းကမင်းပဲ။ ငါဟာ မင်းဘယ်တော့မှ မဖြစ်နိုင်သလို မင်းဟာလည်း ငါဘယ်တော့မှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ကိုယ်ချင်းစာတရားတဲ့။ လူတယောက်ရဲ့ ရင်ထဲကစကားကို တခြားလူတယောက် မကြားနိုင်ဘူး။ လူတယောက်ရဲ့ခံစားချက်အမှန်ကို တခြားလူတယောက်က ဘယ်လိုလုပ် သိနိုင်မှာတဲ့လဲ။ မျိုသိပ်အောင့်အည်းထားရလွန်းလို့ သူ့တကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ် တုန်ယင်နေခဲ့ပြီ။ အန်ချပစ်လိုက်လို့ရရင် ကောင်းမှာ။ သူတကယ်ပြောချင်တဲ့စကားတွေကို နားထောင်ပေးနိုင်လောက် အောင် စိတ်ရှည်တဲ့သူ မရှိတော့ဘူးလား။ သူ့စကားတွေက ခံစားချက်တွေပဲ ရှိတယ်။ အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။ သူတို့မှာက အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ (ဒါမှမဟုတ် အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ သူတို့ထင်နေကြတဲ့) အလုပ်တွေ ကိုယ်စီရှိနေကြတယ်။ လူတယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် နားထောင်ပေးဖို့ သူတို့ဘယ်တော့မှ အချိန်မရတတ်ကြ ဘူး။ မလွှဲမရှောင်သာလို့ နားထောင်ပေးရရင်တောင်မှ စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန်က သူ့လူနာရဲ့ပြောစကားကို နားထောင်နေရသလိုမျိုး အလုပ်သဘော ဆန်နေမှာပါပဲ။
“ငါ့ဘ၀တလျှောက်မှာ ငါဘယ်နေရာကိုပဲ သွားသွား ငါတွေ့ရတဲ့လူတွေဟာ အသစ်အဆန်း တခုခုကို အာသာငမ်းငမ်းလိုချင်နေတဲ့ လူတွေချည်းပဲ။ ကားအသစ်တစီးကို အာသာငမ်းငမ်း လိုချင်နေတယ်။ မြေ ကွက် အသစ်တကွက်ကို အာသာငမ်းငမ်း လိုချင်နေတယ်။ နောက်ဆုံးပေါ်ကစားစရာ အရုပ်တခုကို အာသာငမ်းငမ်း လိုချင်နေတယ်။ သူတို့ဟာ ရုပ်ဝတ္ထုတွေကိုပွေ့ဖက်နေကြပြီး သူတို့ကို ပြန်ပြီးပွေ့ဖက် တာမျိုးကို မျှော်လင့်နေကြတယ်။ မေတ္တာတရား၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့မှု၊ ကြင်နာသနားတတ်မှု၊ ရဲဘော်ရဲဘက် စိတ်ရှိမှု ဆိုတာတွေကို မင်း ရုပ်ဝတ္ထုတွေနဲ့အစားထိုးလို့ မရဘူးလေ။ ပိုက်ဆံဆိုတာ ကြင်နာသနားတတ်မှု အတွက် အစားထိုးလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ အာဏာဟာ ကြင်နာသနားတတ်မှုအတွက် အစားထိုးလို့ ရတဲ့ပစ္စည်း မဟုတ်ဘူး။ ဟော့ဒီမှာ သေနေ့ကိုလက်ချိုးရေတွက်စောင့်ရင်း မင်းကိုငါ ပြော လိုက်မယ်၊ ကြင်နာသနားမှုကို မင်းအလိုအပ်ဆုံး ဖြစ်နေချိန်မှာ အဲဒါကို ငွေရော အာဏာကပါ မပေးစွမ်းနိုင်ဘူး။ မင်းမှာ ငွေတွေဘယ်လောက်ရှိရှိ၊ အာဏာတွေ ဘယ်လောက်ပဲရှိရှိ ရလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူး”
ညနေစောင်းလေးတခုရဲ့ဝင်လုလုနေ ရောင်အောက်မှာ လူတွေကို သူငေးရပ်ကြည့် မောနေမိတယ်။
လူတွေ၊ လူတွေ။ သံပတ်ပေးထားတဲ့ အရုပ်တွေလို သုတ်သုတ်သုတ်သုတ်နဲ့။ လူပင်လယ်လှိုင်းလုံးတွေ ထဲမှာ မျက်နှာအသေတွေ ပေါလောမျောလို့။ သူတို့ဘယ်သူတွေလဲ။ သူတို့ ဘယ်သွားနေကြတာလဲ။ သူတို့ အရူးအမူး ရှာဖွေနေကြတာဟာ သူတို့တကယ်လိုချင်တာမှ ဟုတ်ရဲ့လား။ ဘက်ထရီ အားကုန်သွားသလို သူ့ခေါင်းထဲ တဖြည်းဖြည်း မူးဝေလာတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ အတွေးစ တွေ အကုန်ပြတ်တောက်သွားတော့ တယ်။ ဗိုက်ဆာလိုက်တာ။
( ၂၀၀၂ -ဝန်းကျင်ခန့်က ရေး…)